Kubadda cagta - BBC News Somali
Posted at 12:12 20 Sebtembar 202112:12 20 Sebtembar 2021
Posted at 5:18 16 Oktoobar 20205:18 16 Oktoobar 2020
Posted at 17:21 17 Sebtembar 202017:21 17 Sebtembar 2020
Posted at 13:33 17 Sebtembar 202013:33 17 Sebtembar 2020
Gabar caan ah oo guursatay nin ay gacan ka siisay in xabsiga laga sii daayo
Posted at 15:30 21 Agoosto 202015:30 21 Agoosto 2020
Manchester United oo ka hadashay xadhigga Harry Maguire
Kooxda kubadda cagta ee Manchester United ayaa sheegtay in kabtankeeda Harry Maguire uu "si buuxda ula shaqeynayo booliska dalka Greek" kaddib markii lasoo tabiyay "fal la sheegay" inuu habeennimadii Khamiista ka dhacay jasiiradda Mykonos.
Posted at 10:50 4 Agoosto 202010:50 4 Agoosto 2020
Ciyaartoyda sida ula kaca ah u qufacda oo loo taagi karo kaarka cas
Ciyaartoyda sida ula kaca ah ugu qufacda ciyaartoyda kale ama garsoorayaasha ciyaaraha ayay suurgal tahay in la siiyo kaarka cas, sida uu sheegeen kooxaha dejiya shuruucda kubadda cagta iyo xiriirka kubadda cagta ee Ingiriiska.
Golaha ururka kubadda cagta ee adduunka ayaa sheegay in arrintaas ay soo hoosgaleyso sida 'ku kicidda fal dambiyeed iyo aflagaadaynba’.
Ururka wuxuu intaas ku daray in 'dhammaan dambiyadaas ay tahay in garsooraha uu go’aan ka gaaro.
Go’aankan ayaa imaanaya xilli dunida uu faro ba’an xanuunka safmarka ah ee feyraska korona.
Posted at 3:01 24 Sebtembar 20193:01 24 Sebtembar 2019
Messi oo markii lixaad noqday laacibka dunida.
ciyaartoyga Barcelona ee Lionel Messi ayaa ku guulaystay, ciyaartoyga ugu ragga ee billadda ay bixiso Fifa, taas oo lagu guddoonsiiyey Milan. Isaga oo ka qaaday ciyaartoyga reer Juventus ee Cristiano Ronaldo iyo ka Liverpool ee Virgil van Dijk.
Posted at 14:57 13 Juunyo 201914:57 13 Juunyo 2019
Maxay tahay sababta aysan ragga iyo dumarka u wada ciyaari karin kubadda cagta?
Stephanie Labbe waa gabtephanie Labbe waa gabadh caan ah oo ciyaarta kubadda cagta, ahna goolhaye aad looga yaqaanno caalamka.